Xukuumadda Somaliland oo Mucaawimo gaadhsiisay Qoys haysta Dad badan oo Dhimirka ka Buka. |
Xukuumadda Somaliland oo Mucaawimo gaadhsiisay Qoys haysta Dad badan oo Dhimirka ka Buka.
Hargeisa(GNN):-Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada Somaliland, ayaa taakulo isugu jirta Raashin, hu’ , gogol, maacuun iyo waliba dhar gaadhsiisay Qoys Xoolo-dhaqato ah oo haysta dad xanuunsanaya oo ku dhaqan deegaanka Dawacalay oo ka tirsan Gobolka Maroodi-jeex.
Qoyskan oo haysta Shan Nin oo Maskaxda ka xanuunsanaya, ayaa waxa mucaawimadan la gaadhsiiyey ku wareejiyey Agaasimaha Waaxda rrimaha bulshada iyo daryeelka carruurta ee Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha bulshada iyo Qoyska Cawaale Maxamed Cawaale oo uu weheliyo Wasiir-u-dowlihii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Xukuumaddii Siilaanyo Yuusuf Cismaan Garas oo ka tirsan Xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Masuuliyiinta, ayaa sheegay in ay mucaawimadan kaga jawaabayaa baaqii qaylo-dhaanta ahaa ee ka soo yeedhay Qoyskan oo ay todobaadkan warbaahinta baahisay warbixin laga soo diyaariyey xaalada ay ku sugan yihiin.